Soo Dhaweyntii Maamulaha ee Deephaven | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Ku soo dhowow Dugsiga Hoose ee Deephaven!
Bulshada waxbarashada ee Dugsiga Hoose ee Deephaven waxay kugu soo dhaweynayaan adiga iyo qoyskaaga dugsigeena. Waxaan leenahay dhaqan soo jireen ah oo heer sare ah waxaana rajeynayaa inaan kula shaqeyn doono inta uu ku jiro dugsiga hoose ee cunugaaga. Iskuulkeenu wuxuu nasiib u yeeshay inay yeeshaan shaqaale, arday iyo waalidiin iska kaashanaya sidii loo abuuri lahaa iskaashi waxbarasho. Barayaasha xirfadleyda firfircoon ee dadaalka badan ee dugsigeena waxay had iyo jeer raadiyaan siyaabo lagu horumariyo dugsigeenna iyo waxbarashadeenna fasalka. Waxaan diirada saareynaa ardaydeena iyo koritaankooda shaqsiyadeed iyo waxbarashadooda.
Waxaan ka dhignaa barashada mid nool iyadoo la adeegsanayo:
Fasalka Ka Jawaaba
Habka Isku-dheelitirka Akhriska
Akhrinta Hanuunsan iyadoo la adeegsanayo agab akhris oo siman
Iskuduwaha K-5 ee Barashada Cilmiga
Manhajkeenna la qaatay ee Houghton Mifflin, Xisaabta Maalinlaha ah, 6 + 1 Astaamaha Qorista, Sayniska Foss, Nolosha Taariikhda iyo Dukaanka Weyn ee Weyn.
Muusikada, Farshaxanka, Barashada Jirka, Xarunta Warbaahinta, Kooxda Band iyo Orkestra oo ay wax ka dhigaan khabiiro ruqsad u haysta meelahaas
Barnaamijka Imtixaanka Isbaanishka
Dugsiga kadib Fasallada Isbaanishka
Fursadaha Farshaxanka Fiican - Barnaamijka Masraxa Muusiga Hoose iyo xulashooyinka muusikada ee darajada 5aad.
Waxaan diiradda saareynaa abuurista jawi waxbarasho oo dhiirrigeliya Iskaashiga, Xaqiijinta, Mas'uuliyadda, Naxariista iyo Is-Xakamaynta (xirfadaha CARES). Luuqada guud waxaa sidoo kale loo isticmaalaa ardayda si loo xoojiyo rajooyinka isdaba jooga ah ee shaqada iyo dhaqanka. Barnaamijkeena naxariista iyo Olweus ee kahortaga booc-boocsi wuxuu dhiirigaliyaa jawi waxbarasho oo aamin ah oo taageera dhamaan ardayda, taas oo noo ogolaaneysa inaan taageerno horumarka arday walba ee ku aaddan kobaca tacliinta, bulshada iyo shucuurta.
Dugsiga Hoose ee Deephaven waa jawi waxbarasho firfircoon oo diiradda saaraya had iyo jeer hagaajinta khibradaha waxbarasho ee ardaydeena. Iskuulkeennu wuxuu u dhisay garoon cusub oo qurux badan oo loogu talagalay ardayda 2005, wuxuu abuuray fasal bannaanka 2007 wuxuuna furay xarun warbaahineed oo casri ah 2010. Waxaan bilownay iskaashi sannadka 2011 ee LifeTime Fitness si ardayda loo siiyo qado caafimaad leh hagaajinta maaddooyinka ku jira alaabadayada. Jimicsiga LifeTime wuxuu hadda ku celcelinayaa qaabka barnaamijka qadada dugsiga Deephaven ee Dallas, Chicago iyo Phoenix. In 2012, Deephaven bilaabay iskaashi la Crane Engineering si ay u taageeraan our diiradda on STEM (sayniska, farsamada, injineernimada iyo xisaabta). Hadafkeenu waa inaan sii wadno raadinta qaabab aan ku horumarin karno dugsigeenna si aan ugu diyaarinno ardaydeena mustaqbal guul leh.
Sannadkii 2014, Waaxda Waxbarashada ee Minnesota waxay u magacowday Deephaven a Reward School, mid ka mid ah 20-ka iskuula ee ku yaal gobolka Minnesota ee helay qaabkan afar sano oo isku xigta. Deephaven waxaa markale loogu magac daray Reward School mar kale 2016. Abaalmarintaan waxaa la siiyaa iskuulada ka mid ah kuwa ugu sareeya 15% dugsiyada Title I ee gobolka. Dhammaan dugsiyadu ma helaan maalgalinta Cinwaanka I, oo ku saleysan boqolkiiba ardayda u-qalma Qadada Bilaashka ah iyo Dhimista.
Waalidiintu waa lamaanayaal qiimo ku leh Dugsiga Hoose ee Deephaven, iyagoo door muhiim ah ka ciyaara guriga iyo dugsiga. Waxaan nasiib u helnay inaan helno beel la wadaagta waqtigooda iyo kartidooda ardaydeena. Waxaan ku dhiiri galinayaa dhamaan waalidiinta inay kaqeybqaataan dugsigeena qaab ku habboon waqtigaaga oo ay ka faa'iideystaan hibadaada.
Waad ku mahadsantahay taageeradaada Dugsiga Hoose ee Deephaven. Haddii aad ku cusub tahay deegaankayaga, waxaan kugu martiqaadayaa inaad ku soo wareegto dugsigeenna si aad wax badan uga ogaato sida aan u taageeri karno riyada aad ku leedahay ilmahaaga.
Bryan McGinley, Maamulaha